Izindaba - Ungakuthola kanjani ukuthembela kwamakhasimende ekubambisaneni kokuqala
Ungakuthola kanjani ukwethenjwa kwamakhasimende ekubambisaneni kokuqala
Mayelana nomshini wezimboni othengwa kumakhasimende angaphandle, yiziphi izinto ezingamaphuzu abaluleke kakhulu entengiselwano?
Manje sithanda ukuxoxa ngale nkinga kusuka kwelinye lamacala esihlangabezane nawo muva nje.
Ingemuva: UCali uvela komunye wabakhiqizi eLos Angeles, eU.SA, inkampani idinga ukuthenga imihlobiso enephunga elimhlophe lemifino yasebusika emshinini wokulebula wamabhodlela webhodlela lepulasitiki elingu-25ml ngezinduku eziyi-6 zokhuni. Sizokwenza kanjani kulokhu?
1.Ukuthola izinkinga ezibhekene nekhasimende: Azikaze zithole kusuka eChina phambilini. Ukuthengwa kwabo kwangaphambilini kwenziwa nge-Ebay; Ngakho-ke abanalo ulwazi olwanele kolunye udaba olufanele ekuhwebeni kwamazwe omhlaba.
Isibonelo, badinga umshini ngokuphuthumayo, kepha abalucabanganga lolu hlobo lomshini wezimboni owenziwe ngezifiso ngokuya ngemfuneko yeklayenti, uzodinga isikhathi esithe xaxa. Kepha bavele babala usuku lokuthumela. Kukhona nezinye izinto eziningi ezizothonya ukulethwa kwezinsimbi, njengokukhokhwa kwe-TT, abanalo ulwazi lokuthi izofika izinsuku ezingaki ku-akhawunti yethu. Ngakho-ke sidinga ukucabanga ukunikeza izeluleko ezinhle kakhulu ukuthi singakuthola kanjani ukukhokha kwabo kusenesikhathi ukuze sikwazi ukuqala umkhiqizo ngokushesha.
Ngombono wezinkinga ezingenhla, kudingeka sinikeze impendulo yezobuchwepheshe kwiklayenti ngokushesha ngangokunokwenzeka ukonga isikhathi.
3. Nikeza ikhasimende isiphakamiso esifanelekile. onjiniyela bethu basebenzisa i-CAD ukwenza imidwebo yesakhiwo. Kubandakanya ukondla i-turntable, ukuhambisa, i-inkjet coder, umshini wokulebula wamabhodlela nxazonke (isiyingi esigcwele), imishini ephezulu yelebula, itafula lokuqoqa isikwele njll, ngosayizi nokumiswa. Akunandaba ukuthi ikhasimende lingumthengi okhokhelwayo noma cha, senza amapulani nemininingwane kusengaphambili.
Hlaziya izinkinga ezikhona ezenzekile: isikhungo samandla adonsela phansi seKlayenti asilinganisiwe, ungaqinisekisa kanjani: 1) ukuzinza kwelebuli yomshini; 2) imikhawulo emibili yelebula ihambelana; 3) ijubane lifinyelela kumabhodlela ayi-120 ngomzuzu njengoba kudingeka iklayenti. Lapho sixoxa ngaleli cala ngaphambi kokugcina ukuqinisekiswa kwe-oda, siphakamise iklayenti ukuthi lithumele amasampula ebhodlela nelebuli ngokushesha okukhulu. Lapho sithola amasampula (amabhodlela, ilebula rolls, njll.). Unjiniyela wethu uguqule umdwebo wesakhiwo esinqunyelwe, ushintshele ku-labeler yohlobo lwamasondo enkanyezi ukuthuthukisa isivinini sokulebula kuze kube ngamabhodlela ayi-120 ngomzuzu.
5. Phakamisa ukusebenzisa i-airfreight ukwenza isiqiniseko sokuthi umshini ufika ngesikhathi ngokucatshangelwa kuphela sekusele izinsuku eziyi-10 isikhathi sokukhiqiza. Kulesi simo, siqinisekise zonke izinyathelo nomnyango wezokukhiqiza ukuthi izinto zokusetshenziswa okufanele zihlelwe kusengaphambili futhi umnyango wethu wokukhiqiza usebenza isikhathi esengeziwe ukuze uqedele umshini ngesikhathi esifushane kakhulu ukuhlangabezana nezidingo zokukhiqizwa kwamakhasimende.
Ngemizamo yethu sobabili, sigcwalise ngempumelelo ukuhleleka komugqa wokufaka umshini ngekhasimende lokuqala okokuqala kahle.
Isikhathi Iposi: Dec-15-2019